विजनेस Archives | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
काठमाडौँ । संघीय गणतन्त्र जर्मनीले नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त विकास अनुदानस्वरुप करिब एक अर्ब ८१ करोड ५० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । दुईसय २० किलोभोल्ट दमौली–लेखनाथ जलविद्युत् प्रसारण ल... Read more
काठमाडौं । केहि दिनदेखि लगातार घटबढ भइरहेको सुनको भाउ आज भने बढेको छ । आज सुन तोलामै ३०० रुपैँयाले बढेको छ ।आज चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज सुन... Read more
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ । १.साउदी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३३ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४९ पैसा । २.कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १५ पै... Read more
काठमाडौं । हिजो स्थिर रहेको सुनको भाउ आज पनि स्थिर रहेको छ । आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ । आज चाँदी तोलामा ५ रुपैँयाले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज सुन प्रतितोला ५४ ह... Read more
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ । १.साउदी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २४ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४० पैसा । २.कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ०५ पै... Read more
निरन्तर घटिरहेको सुनको भाउ यति पुग्यो आज…
काठमाडौं । केहि दिनयता लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज भने स्थिर रहेको छ । आज चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार आज सुन प्रतितोला ५४ हजार ३०० रुपैँयामा कारो... Read more
आजको लागि साउदी ,कतार, मलेसियन लगाएत विभिन्न देशको मुद्राको सटहीदर यस्तो छ…
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ । १.साउदी रियाल एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २४ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ४० पैसा । २.कतारी रियाल एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ०६ पै... Read more
सुनको मूल्य घट्यो, कति छ आज ???
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार आज सुनको मूल्य घटेको छ । हिजोको तुलनामा आज सुन प्रतितोला दुई सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५४... Read more
यस्ताे पनि ! मोहर लगानीबाट एक करोड नाफा…
पाल्पा । पचास पैसा लगानीबाट स्थापना गरिएको रामपुर नगरपालिकास्थित अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी गत आवमा रु एक करोड ६० लाख नाफा गर्न सफल भएको छ । विस २०५५ मा २८ जना युवाले प्रतिव्यक्ति ५० पै... Read more
सुनचाँदीको भाउ थोरै बढ्यो, हेर्नुहोस् कति छ मूल्य ???
काठमाडौं । बिहिबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य थोरै रुपैयाँले बढेको छ । आज सुन प्रतितोला चार सय रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी पाँच रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महसांघका अनुसार... Read more